Pep Guardiola Oo “ku Qancay” Barcelona Inay La Soo Saxiixan Doonto Raheem Sterling Haddii Ay Xiiseyneyso
HomeWararka CiyaarahaPep Guardiola oo “ku qancay” Barcelona inay la soo saxiixan doonto Raheem Sterling haddii ay xiiseyneyso
November 9, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Pep Guardiola ayaa sheegay in uu ku qanacsan yahay in Barcelona ay la soo saxiixan doonto Raheem Sterling haddii ay xiiseynayaan weeraryahanka Manchester City .
Sterling ayaa dhawaan qirtay in uu ka fikiri doono in uu isaga tago Etihad Stadium sanadka soo socda sabab la xidhiidha wakhti la’aan xilli ciyaareedkan.
Barca ayaa tan iyo markaas lagu qiimeeyay inay xiiseyneyso xiddiga heerka caalami ee dalka England, kaasoo lagu soo waramayo inay isha ku hayaan inay bisha Janaayo heshiis amaah ah kula soo wareegaan.
Guardiola ayaan hubin sida ay run u tahay wararka la isla dhexmarayo, laakiin tababaraha reer Catalan ayaan wax shaki ah ka qabin in Barca ay heli doonto dariiqeeda haddii ay raacdo xiisaha bilowga ah.
“Haddii Barcelona ay xiiseyneyso mid ka mid ah ciyaartoydeena, waxaan ku qanacsanahay inay heli karaan.
Sterling, oo galay xilli ciyaareedkiisii ​​toddobaad ee City tan iyo markii uu kaga soo biiray Liverpool, ayaa ku soo bilowday lix kulan tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan.